EmPivot: Fanagonam-baovao Ho An’ny “Fampitam-baovao Maitso” · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Lucie Marie Dorion
Voadika ny 07 Jona 2017 16:57 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, Italiano, Français, 简体中文, 繁體中文, Español, English
(Marihina fa tamin'ny 26 Jona 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Tranonkala hizarana lahatsary manana foto-kevitra manokana momba ny tontolo iainana ny EmPivot (anglisy). Ahafahan'ny olon-tsotra, ny fikambanana sy ny orinasa izay liana amin'ny foto-kevitra mba hifandray ity fampitam-baovao manana votoaty mikasika ny tontolo iainana izay natao ho an'ny tranonkala manokana ity. Avy amin'ny teny anglisy « empower » izay adika hoe mahaleontena ny anarana hoe « EmPivot » (anglisy) , araka ny fanazavan'ny tranonkala sy ny teny hoe «pivot». Ny hanome ireo olom-pirenena tsotra ny fitaovana ilaina mba handraisana an-tànana ny olan'ny tontolo iainana ary hiverin-dalana indray sy hiova ho “maitso” no tanjon'ny mpanorina ity tranonkala ity.
Avy any El Salvador ny ohatra iray amin’ity lahatsarin'ny olom-pirenena ity (espaniola). Naka sary ny tsy fahatanterahan'ny didy hanarenana ny fahavoazan'ny lakan-drano ny vondron'olona mpiara-monina niahiahy momba ny zava-nisy izay mipetraka eo akaikin'ny renirano Garrobo. Nisy Ramose antsoina hoe Orlando de Sola Wright nitaona ireo korontam-bato tao anatin'ny lakan-drano, ka nahatonga izany ho tsentsina taty aoriana ary nahatonga tondra-drano teo amin'ny fiarahamonina manodidina. Na dia nanome baiko ny fanesorana ireo korotam-bato sy ny fanorenana ny barazy eo amin'ny lakan-drano mba hampihenana ny fandehanan'ny rano aza ny mpitsara tao amin'ny Fitsarana Salvadoreana Fahenina dia tsy mbola notanterahana io didy io tamin'ny fotoana nandefasana ny lahatsary an-tserasera tamin'ny volana Desambra 2007.
Manolotra antsika lahatsary mahatsikaiky iray momba ny karazana fitateram-bahoaka ao Beijing ihany koa ny Green Brothers ao amin'ny Green Beat ao Shina (amin'ny teny Shinoa), miaraka amin'ny torohevitra mikasika ny fihetsika tokony atao rehefa any anaty fiara fitateram-bahoaka, ny mahatsara ny mifaneritery ao anaty metro, ny tombony ara-pahasalamana sy ny voka-dratsin'ny fitaingenana bisikileta ary ny hoe nahoana isika no tokony hisafidy ny fomba maitso indrindra raha hifindra toerana.